Waa maxay Bitcoins? | Laga soo bilaabo Linux
210 | | Laga soo bilaabo Linux, Kuwa kale, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka, dhowr
2 Astaamaha Bitcoin:
3 Sidee loo isticmaalaa Bitcoin?
4 Sidee loo abuuraa Bitcoins?
Seeraar waa nidaam lacag bixin ama nooc ka mid ah lacag elektarooniga, taas oo lagu gartaa in aan la ansixin ama aan loo xadidin wax bangi ama hay'ad maaliyadeed, oo ka duwan lacagaha ama sarrifka laga isticmaalo adduunka.
Markaa asal ahaan "lacagtan" dalban la'aanta ah saamaynta lagu yaqaan lacagta dhaqameed, taas oo dejisa xuduudaha sida sicir bararka ama dulsaarka dulsaarka, arrimaha saameeya kororka qiimaheeda.
Habka loo xisaabiyo Bitcoins waxaa lagu aasaasay iyada oo loo marayo algorithm kaas oo mas'uul ka ah cabbiraadda dhaqdhaqaaqyada ama macaamillada lagu sameeyay waqtiga dhabta ah, macaamilladani waa toos, mahadsanid xaqiiqda ah inay ku dhisan tahay nidaamka isbarbardhig si aad u aragto o P2P; shabakad ka shaqeysa kombiyuutarada si ay ula wadaagaan macluumaadka tooska ah adeegsadaha ilaa isticmaalaha, iyada oo loo marayo dhibcaha isgoysyada ama server kala duwan, kuwaas oo ku xiran sida kuwa u dhigma. Intaa waxaa dheer, Bitcoin waxaa maamula oo hagaajiya adeegsadayaasheeda, kuwaas oo mas'uul ka ah bixinta hagaajinta ay u arkaan inay lagama maarmaanka u tahay nidaamkan, iyo maxaa yeelay waa la qabsi, waxay siineysaa xorriyadda lagu doorto barnaamijyada loo adeegsan karo maamulkeeda.
Si aad u isticmaasho Bitcoin, waa loo soo dejisan karaa sidii codsi kombuyuutarkaaga ah; nooc kasta oo nidaamka qalliinka ah, iyo taleefannada gacanta; ama loogu talagalay android ama iOS.
Bitcoin ayaa ka hoos shaqeysa aragti iyo dalab; taas oo cadeyneysa inay qasab tahay inay jirto dhibic isku dheelitirnaan suuqa marka loo eego bixinta wanaaga ama adeegga, si markaas dalabka loogu qanco.
Sawirka Sahayda iyo Baahida
Bitcoin lama been-abuuri karo, maxaa yeelay waa lacag aan jidh ahaaneed ama qaab lacag-bixin ah, oo ka hoos shaqeysa qeexitaanka lacagta loo yaqaan 'cryptographic currency'.
Sababtoo ah waa nidaam lacag bixin baahsan, taas oo ah, ma jirto dhinac saddexaad oo hawsha socda, macaamilku waa toos, aad ayey ugu egyihiin helitaanka ama dirista emaylka, lamana celin karo dadka isticmaala.
Bitcoin waxay la shaqeysaa nidaam xisaabeed la daabacay oo la yiraahdo Blockchain, kaas oo lagu gartaa soo bandhigida qaab "jeebka" ah, oo si ammaan ah u diiwaan geliya dhammaan macluumaadka ku saabsan macaamillada la fuliyay.
Bitcoins waxaa lagu heli karaa iyada oo la isweydaarsado lacagaha kale, oo ah qaab lacag bixin ah oo loogu talagalay alaabada iyo adeegyada, iyo iyada oo loo marayo macdan.
Sidee loo isticmaalaa Bitcoin?
Waxa ugu horreeya waa inaad Bitcoin u rakibto kombuyuutarkaaga ama taleefankaaga gacanta. Ku rakibida arjiga waxaad awood u yeelan doontaa inaad sameysato boorsada jeebka, taas oo kuu oggolaan doonta inaad fuliso howlahaaga lacag bixinta, oo uu weheliyo furahaaga gaarka ah, si aad u ilaaliso macluumaadkaaga, iyo mid dadweyne, si aad ula shaqeysid meelaha kala geddisan ee kuu oggolaanaya inaad isticmaal Seeraar.
Markaad rakibineysid arjiga, cinwaan Bitcoin ayaa la abuuri doonaa, oo bilaash ah, si loo diro loona helo Bitcoins-ka. Waxa kale oo aad abuuri kartaa tirada cinwaanada aad u baahan tahay, tani ma xaddideyso. Diiwaanka xaddiga Bitcoins ee ku jira koontadaadu waxay la mid tahay nidaamyada kale ee lacageed si loo badbaadiyo lacagtaada, markaa haddii aad hesho ama aad qarash gareyso, tani waxay si toos ah oo ammaan ah uga muuqan doontaa koontadaada. In kasta oo macaamilku yahay mid guud, haddana nidaamku wuxuu ka horjoogsadaa dadka isticmaala inay muujiyaan aqoonsigooda.
Si aad awood ugu yeelatid inaad dirto Bitcoins, waa inaad kuheshaa arjiga furahaaga khaaska ah kadibna xulo macaamilka iyo cinwaanka qaataha. Taas ka dib, macaamilku wuxuu si toos ah uga muuqan doonaa koontadaada, si guud ayaa loo diiwaangaliyay, laakiin amaan ah, oo ku saabsan server-yada kala duwan ee ay maamusho shabakada Bitcoin. Xusuusnow in qalabka aad ku fuliso howlahaaga lacag bixinta, aysan jirin wax diiwaan ah oo iyaga ka mid ah, laakiin koontadaada si badbaado leh ugu jirta, shabakadda xannibaadda. Waxaa loo adeegsaday in lagu daro macaamillada sidoo kale waxaa lagu ansixiyaa nidaamka.
Nidaamkan macdan Waxaa loo isticmaalaa in lagu oggolaado, lagu hubiyo laguna diiwaangaliyo hababka lacag-bixinta, si silsiladdan aan loo beddeli karin iyo in shabakadda xannibaadda ay ahaato mid ammaan ah.
Sidee loo abuuraa Bitcoins?
Marka hore waxaad ubaahantahay barnaamij kuu ogolaanaya inaad macdanta qodo, tan waxaad kuxiraneysaa macmiil Bitcoin ah, iyo boorso dijitaal ah oo aad ku kaydiso Bitcoins-kaaga. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa nidaamka Bitcoinplus, kaas oo kuu ogolaanaya inaad macdanta ka qodobo adoo ka tagaya daaqada bogga oo furan kumbuyuutarkaaga adoo adeegsanaya barnaamij wadaag ah.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in Seeraar kasta uu leeyahay koodh sir ah, oo ay tahay in laga baaraandego si furaha 64-lambar ah ee balooggu u leeyahay loo helo. Marka, si loo kasbado Bitcoins, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad ka baaraandegto algorithms-ka Bitcoin, si nidaamku u daryeelo bixinta kuwa taageera arrintan. Nidaamku wuxuu bixiyaa tiro cayiman oo ah "baloogyo" oo aniga ah, kuwaas oo laga daawan karo waqtiga dhabta ah, sidaa darteed dadka isticmaala ee doonaya inay soo saaraan Bitcoins waxay ogyihiin inta ka mid ah baloogyadan inay diyaar u yihiin inay waxqariyaan.
Aqoonsi la'aanta macaamilada
Waxyaabaha murugsan ayaa ah inaysan sahlaneyn in hawlgalkan la fuliyo, taas oo ka dhigaysa mid lagama maarmaan u ah in la helo kombiyuutar heerkiisu sarreeyo ah oo ka shaqeyn kara furaha baloogyada dhibaato la'aan. Intaa waxaa dheer, in si gooni gooni ah loo kaydiyo baloogyada ayaa sidoo kale noqotay mid aad u adag, waana sababta ay isticmaaleyaal badan oo u heellan inay ku biiraan barkadaha macdanta. Tani waxay ka kooban tahay dhowr isticmaale oo wada jira, oo naftooda u huraya kala-soocidda baloogyada, ku biiraya kombuyuutarradooda, si hadhow, markii ay ku guuleystaan, ay ugu kala qeybsadaan faa'iidada. Fikradda waxaas oo dhami waa in si dhakhso leh loo jabiyo koodhadhka, oo la isku dayo in la furo sirta oo dhan ama qayb ka mid ah.
Haddii aadan aqoon ama qalab u lahayn macdanta, waxaad sidoo kale ka heli kartaa Bitcoins guryaha sarrifka ah ee kuwaan, lacagaha kale.
Adoo og dhammaan waxyaabaha kor ku xusan, maahan inaad khabiir ku ahaato isticmaalka Bitcoin. Kaliya xusuusnow inaad keydiso furahaaga gaarka ah mid aamin ah, maadaama nidaamku uusan kuu oggolaanayn inaad dib u cusboonaysiiso furayaasha gaarka ah, oo aad hubiso meesha aad u isticmaali karto nidaamkan si aad lacagahaaga u bixiso.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida lacagta loogu sameeyo bitcoins at: sida lacag looga helo.net
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Laga soo bilaabo Linux » Waa maxay Bitcoins?
Sharaxaad wanaagsan, laakiin waxaan u maleynayaa in macluumaadka la sii ballaarin karo. Tan waxaan uga tagayaa xiriiriyeyaasha:
Waad ku mahadsantahay wadaagida xiriiriyeyaasha
Maqaalka ayaa si fiican u sharxaya qaybta farsamada ee bitcoin, laakiin ma aha qaybta wax ku oolka ah: alaabooyinka ama adeegyada la iibsan karo iyo meesha.
ku dhowaad badeecad kasta oo lagu iibiyo internetka oo lagu beddeli karo doollar ama dahab jireed
laakiin qiimuhu waa mid xad dhaaf ah oo aan xasilooneyn waana sababta loo isticmaalay wax ka badan wax kasta oo mala awaal ah
1 bitcoin waxay ka kici kartaa hal maalin illaa 600 oo doolar sida mararka qaar dhacday
Ugu jawaab roob
kor ama hoos u kac waxaan ubaahanahay inaan iraahdo
Maqaal aad u wanaagsan, mahadsanid ...
Si aad ah iigama muuqato sida lacagaha elektaroonigga ahi ugu saameynayaan khiyaanada bangiga